Nhau - Ungadzivise sei kumucheto kutsemuka kana uchicheka girazi nemvura jeti?
Kana jekiseni remvura richicheka zvigadzirwa, mimwe michina inozove nedambudziko rekucheka uye isina kuenzana magirazi magirazi mushure mekucheka. Muchokwadi, yakanyatsogadzika waterjet ine matambudziko akadaro. Kana paine dambudziko, zvinotevera zvinhu zvejjeti yemvura zvinofanirwa kuongororwa nekukurumidza sezvazvinogona.
1. Iyo yekumanikidza yejet yemvura yakanyanyisa kukwirira
Iyo yakakwira iyo yejetjet yekucheka kumanikidza, iyo yepamusoro iyo yekucheka kushanda, asi iyo yakasimba iyo mhedzisiro ichave iri, kunyanya yekucheka girazi. Iyo yekudzokera shure kukanganisa kwemvura kunokonzeresa kuti girazi ribvunde uye zvinokonzeresa kuenzana makona. Nyatso gadziridza kumanikidza kwemvura kuti jeti remvura rigogona kungocheka girazi. Izvo zvakakodzera kwazvo kuchengetedza girazi kubva mukukanganisa uye kudedera zvakanyanya sezvinobvira.
2. Iyo dhayamita yejecha pombi uye kamwene yakakura kwazvo
Iyo pombi dzejecha nemabhuru emhando yepamusoro zvinofanirwa kutsiviwa nenguva mushure mekunge zvasakara. Nekuti mapaipi ejecha nemazizi zvikamu zviri panjodzi, hazvigone kukosheswa mushure mekunge imwe nhanho yemvura yapedzwa, zvinozokanganisa padyo negirazi uye pakupedzisira zvichikonzera kumucheto kwegirazi kutsemuka.
3. Sarudza yakanaka mhando jecha
Mukucheka kwemvura, mhando yejecha remvura inoenderana zvakananga nemhedzisiro yekucheka. Hunhu hwemhando yepamusoro yejecha remvura jecha rakakwirira, avhareji muhukuru uye zvidiki, nepo yakadzika jecha remvura inowanzo sanganiswa nejecha rehukuru hwakasiyana uye hwakaderera mhando. , Kana yashandiswa chete, simba rekucheka kwejeti yemvura harichazove rakaenzana, uye mupendero wekucheka hauchazogadzikana.
4. Kucheka chinetso chehurefu
Kucheka kwemvura kunoshandisa kumanikidza kwemvura, iyo yekucheka nzvimbo yekumanikidza ndiyo hombe, uyezve inoderera zvakanyanya. Girazi rinowanzove nehuremu hwakati. Kana paine chinhambwe pakati pegirazi nemusoro unocheka, zvinokanganisa kucheka kwejetjet. Waterjet yekucheka girazi inofanirwa kudzora chinhambwe pakati pejecha chubhu negirazi. Kazhinji, daro pakati pepombi jecha uye girazi rakaiswa kune 2CM.
Pamusoro pezvinhu zvataurwa pamusoro, isu tinodawo kuongorora kuti kumanikidzwa kwejeti yemvura kwakanyanya here, kuti jecha rekupa jecha rinowanzo kupihwa, ingava pombi yejecha iri yakasimba, nezvimwe, zvirinani kutarisa mamwe marongero, gadzirisa uye nyora kukosha kwakanyanya Dzivisa kumucheto kutsemura panguva yekucheka girazi
Post nguva: Jul-29-2021